दुई 'अभागी' पिताः न खुलेर हास्न सक्छन्, न धित मारेर रुन नै ! (भिडियाे) | Nagarik News - Nepal Republic Media
दुई 'अभागी' पिताः न खुलेर हास्न सक्छन्, न धित मारेर रुन नै ! (भिडियाे)
काठमाडौं– केहि महिना अघिदेखि सञ्जिव न्यौपानेका परिवार पीडामा छन्। न्यौपानेको परिवारलाई न खाननै मन लाग्छ, न राम्रोसँग सुत्न नै मन लाग्छ। त्यसोत अर्कोतिर पैसाको खोलो पनि त्यसैत्यसै बगिरहेको छ। जिन्दगीमा खुशीको पल पर्खेर बसेका न्यौपाने दम्पतीलाई अहिले यस्तो घटनाले पिरोल्छ भन्ने सायदै सोचेका थिएनन। घरमा नयाँ सदस्य आगमनको पर्खाईमा बसेका न्यौपाने परिवारमा नयाँ सदस्य त आगमन भयो तर जीवनमरणको दोसाँधमा बच्चा जन्मियो।
बुधबार साँझ नागरिक नेटवर्क साप्ताहिक कार्यक्रम नागरिक फ्रन्टलाईनमा श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले यसरी सुनाए।
‘श्रीमतीको पेटमा बच्चा थियो। धापासीको ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पतालमा रेगुलर फलोअपमा गयौं। श्रीमतीलाई थाइराइडको समस्या थियो। सबै चेकअप गराएपछि बच्चा राम्रो छ। वजन पनि राम्रो छ। डाक्टरले नर्मल बच्चा पाउन गाह्रो हुन्छ, फेरि जति ढिला भयो त्यति समस्या आउन सक्छ, बरु अहिले नै बच्चा निकालौं भन्नुभयो बच्चा जन्मिएको करिब आधा घण्टापछि चाँडो चाँडो श्वास फर्ने समस्या भयो भने।’
‘बच्चाको सास सामान्य भएन। भेन्टिलेटरमा राखौं भने। भेन्टिलेटरमा राखिएपछि निमोनिया भयो भन्ने कुरा आयो। क्लेबसियला ब्याक्टेरियाको संक्रमण भनेर एन्टिबायोटिक दिइयो। मस्तिष्कमा गडबडी भएको भन्दै काँप्ने वा थर्थराउने थाल्यो अब ढाडको पानी चेक गर्नुपर्छ भने। बच्चाको ढाडमा सुई रोपेर पानी निकालिएपछि थाहा भयो बच्चाको मस्तिष्कमा संक्रमण भएको रहेछ। बच्चा जन्मिएको ४० औं दिन बच्चाको सबै ठीक छ भने। अब सात दिनको औषधी खानुपर्छ भने।’
२६ दिन एमाआरआई गर्नुपर्छ भनेका थिए तर ४० दिन लगाए। त्यतिन्जेल एनआइसियूमा राखियो। बच्चाको पाँच पटकसम्म अप्रेसन गरियो। पाचौं अप्रेसनसम्म डाक्टरहरुले केहि सोधेनन्। जस्तै अप्रपेशन गरेर काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि सोधेनन्। डाक्टरले लापरवाही गरेको पनि स्वीर्कादैनन्।
उपचारको लागि करिब ३५ लाख खर्च भयो। इन्डियाबाट औषधी पनि ल्याएका थियौं । त्यो औषधीमा ७, ८ लाख खर्च भयो। थेरापी तीन महिना गरियो।’
त्यस्तै विष्णु पन्थिको पनि व्यथा फरक पीडा उस्तै छ। पन्थिकी श्रीमती काठमाडौंको असनस्थित त्यौड माविमा पढाउथिन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले सुत्केरी बिदा दिनुको सट्टा मानसिक यातना दिएको पन्थि बताउँछन्।
चिकित्सकले आराम गर्न सिफारिस गरेको पत्र दिँदासमेत प्रअ केसीले गर्भवती शिक्षिकालाई बिदा नदिएको बताउँछन्। विदा नपाएर आराम गर्न नपाएपछि बच्चा गुमाउनु परेको पन्थिले बताए। अस्पताल जान छोडेर पन्थिकी श्रीमती विद्यालय जान थालिन। विदा दिनुको साटो उल्टै प्रअले स्पस्टिकरण सोधेको उनी बताउँछन्।
डाक्टरले पूर्ण रूपमा आराम गर्नुपर्ने सिफारिस दिँदा पनि प्रअ केसीले बिदा नदिदा आफुले शिशु गुमाउन परेको बताए।
गत चैत २४ आफूले अस्वस्थ भएको जनाउँदै प्रधानाध्यापकलाई सुत्केरी बिदाबापत पाउने सुविधा अग्रिम रूपमा कट्टा गराइदिन आग्रह गर्दै बिदाका नदिएको बताउँछन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७६ २२:०१ बुधबार